HomeWararka CaalamkaSharciyada ayaa si dhaqso ah ugu soo dhacay Dadkii Online-ka ka xareestay
October 24, 2020 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Sanadkii 2019 iyo Sanadkan 2020 waa labadii sano ee Sharciyada ka dhaceen Dadka Sweden ka helay Sharciga ku meel gaarka ah ee 3 sano ah waxana Dadkaasi oo qaarkood helay Shaqooyin iyo Guryo ay dib u codsadeen Sharciga si loogu dheereeyo mar kale.
Dadka xareestay Sharciyada ayaa labo Qeyb u kala Xareestay Sharciga qaarkood waxay Online-ka ka Xareeyeen ama ka Codsadeen Sharciga iyagoo jawaabta ku helay mudo 2 bil gudahood halka kuwa Laanta Socdaalka u geeyay Warqada Codsigooda ee ku Aadan Sharciga ay ku qaadatay mudo sanad ah.
Mid kamid ah Dadka Sharciga ku xareeyay qaabka tooska ah isla markana tagay Xaruunta Laanta Socdaalka ee Sundbyberg oo la hadlay Somaliska ayaa sheegay in Mudo sanad kadib uu helay sharciga.
Waxaa jira Dad kale oo qaab Online ah ku Xareeyay kuwaasi oo durba ku helay Jawaabta laabta Socdaalka ee kiiskooda.
Hay’adda Laanta Socdaalka ee Migrationsverket oo war kasoo saartay Sharciyada la kordhinayo ayaa Dadka ugu baaqday in qaab Onlien ah kusoo dalbadaan taasi oo keeni karta in jawaabta ku helaan Dhaqso.
Fadlan u Xareyso Codsigaaga qaab Online ah Adiga oo booqanaya boga Migrationsverket.se ama raadso qof kaa caawiya arinkan waayo mudo sanad ah waxaa soo kordhi kara Sharciyo Cusub.
U gaar Ah Somaliska.com